Ohabolana 105 Akaro , aidino , ohatra ny ondrin' ilay sarotra . [Houlder 1895, Rinara 1974]
Akaro , aidino : toy ny andry ondrin’ ilay sarotra . [Cousins 1871 #37, Veyrières 1913]
Ohabolana 491 Andry be fiankinana . [Veyrières 1913 #804]
Andry be fiankinana , vovonana iadian’ ny lohany . [Nicol 1935]
Ohabolana 492 Andry boboka : ny fahavalo tsy aiza fa eo am-povoan-trano . [Rinara 1974 #246]
Fahavalo tsy lavitra toa andry boboka eo ampovoan-trano . [Rinara 1974 #1054]
Ohabolana 494 Andry ombin' ankizy , ka raha tsy afa-po mifamerina . [Rinara 1974 #247]
Ohabolana 495 Andry ombin' Ifiringa adala , ka ny aloha voatora-tandroka , ary ny aoriana voafola-drambo . [Houlder 1895]
Ohabolana 496 Andry ombin' Imalemifanahy : ny noana voasafosafo , ny voky voalambolambo . [Rinara 1974 #249]
Ohabolana 497 Andry ondrin' Ikotokely , ka ny maty no ananam-be . [Rinara 1974 #250]
Ikotokely miandry ondry ka ny maty no ananam-be . [Rinara 1974 #1394]
Ikotokely miandry ondry , ka ny maty no ananany . [Houlder 1895 #1445, Veyrières 1913 #554]
Ikotokely miandry ondry : ny maty no ananany . [Cousins 1871 #1109]
Ohabolana 498 Andry telo itoviana aman' olona . [Veyrières 1913 #836, Rinara 1974 #251]
Andry telo itoviana amin' olona . [Houlder 1895 #849, Cousins 1871 #201]
Ohabolana 499 Andri- tranon’ Ikaladedaka : ny any ny tena feno tain’ akoho , ka ilaozana mifafa ny an’ olona . [Cousins 1871 #216]
Andry tranon' Ikaladedaka : ny an' ny tena feno tain' akoho , ka ilaoza-mifafa ny an' olona . [Rinara 1974]
Ohabolana 800 Aza atao andry ombin' ilay adala , ka ny aloha voatora-tandroka , ary ny aoriana voafola-drambo ; fa ataovy andry ombin' ilay mora , ka ny aloha voakahankahana , ny aoriana voasafosafo . [Veyrières 1913]
Ohabolana 943 Aza mananika andry malama . [Cousins 1871 #557]
Aza mianika andry malama . [Veyrières 1913 #69]
Ohabolana 2153 Folaka andry niankinana , toro vato nandiavana . [Veyrières 1913 #809]
Ohabolana 4011 Mby amin' ny andry atsimo . [Veyrières 1913 #6573]
Ohabolana 4461 Mitsaitsaika fihavy ny tsy manan-dreny , manao fihavim-pangady , tsy miala fa ao am--pototr' andry . [Veyrières 1913 #1035]
Mitsaitsaika fihavy ny tsy manan-dreny , manao fihavim-pangady , tsy miala fa eo am--pototr' andry . [Rinara 1974 #2493, Cousins 1871]
Ohabolana 5162 Ny havana ataovy toy ny andry ombin' ilay mora : ny aloha voasafosafo , ary ny aoriana voatehatehaka . [Houlder 1895]
Ohabolana 5603 Ny toko telo mahamasa-nahandro . [Rinara 1974 #3308]
Ny toko telo no mahamasa-nahandro . [Cousins 1871 #2509, Nicol 1935 #416]
Toko telo mahamasaka ny nahandro , andry telo mahatanjaka ny trano . [Veyrières 1913 #1717]
Toko telo mahamasa-nahandro . [Rajemisa 1985]
Toko telo mahamasa-nahandro , tady telo olana saro- tapahina . [Rinara 1974 #4161]
Ohabolana 6163 Raha tonga amin' ny andry ny andro . [Veyrières 1913 #6604]
Ohabolana 7908 Tsy toro vato nandiavana , na maty Vazaha nandrafitra . [Veyrières 1913 #3375, Cousins 1871 #3588]
Tsy toro vato nandiavana , tsy folaka andry niankinana . [Veyrières 1913 #3376]